UMasipala waseMthonjaneni uvule ngokusemthethweni izakhiwo zomphakathi | isiZulu
Isitholakele indawo okuthiwa yiwona mnyombo wesifo iListeria eGoli
Babuyele emsebenzini abasebenzi bakwa-DSW
Kuwine iSACP ngenxa yokuphela kwesithembu seDA, EFF, ne-MCA eMetsimaholo
EThekwini - Umphakathi uphume ngobuningi bawo ukuzozibonela ubuholi bukaMasipala waseMthonjaneni uvula ngokusemthethweni izakhiwo ezizosetshenziswa wumphakathi.
Iningi lalezi zakhiwo zaqala ukwakhiwa wuMasipala waseNtambanana ngaphambi kokuba uhlakazwe ngo-Agasti wangonyaka odlule.
Lo masipala wahlakazwa waphela kanti wonke amawadi akhona nawo umsebenzi wawo wafakwa ngaphansi kukaMasipala uMthonjaneni.
Kusukela ngoLwesine, lo masipala uzohambela ezindaweni ezahlukahlukene uvula izakhiwo zomphakathi. Esokuqala isakhiwo esinikelelwe emphakathini yinkulisa ekuWadi 12, oVeceni.
Ezinye izakhiwo ezizonikelwa emphakathini kulezi zinsuku ezimbalwa ezizayo kubalwa kuzo ihholo lomphakathi kanye nenkundla yezemidlalo.
Yize lesi kuyisenzo esihle esenziwe wuhulumeni wakule ndawo, kukhona abebengeneme ngalokhu bavala umgwaqo ongenela kuWadi 7 ngaphambi kokuba ubuholi bukamasipala budlulele khona ukuyovula ngokusemthethweni ihholo lomphakathi elikuWadi 9.
Amalungu omphakathi asakaze izingodo emgwaqeni ekhala ngokuthi akusiwona wonke amawadi afakwe ngaphansi kukaMasipala waseMthonjaneni kanti lokhu kubeka izakhamuzi enkingena yokungatholi izinsiza zikahulumeni.
Ilungu lomphakathi, uNkosikhona Cele, ohlala kuWadi 7 utshele abeZindaba24 ukuthi ziningi izinto abazidingayo bewumphakathi kodwa kabazi ukuthi bazobiza bani asabele kuphi njengoba bengenalo ngisho ikhansela.
OLUNYE UDABA:Kugxekwa uMasipala waseMzumbe ngezakhiwo ezingawusizi ngalutho umphakathi
“Sibone kungcono sivale umgwaqo sibavimbe bengakaqedi nalokhu abakwenzayo ngoba abafiki kithi uma sinezikhalazo ezidinga ukuxazululwa. Ukufika bezovula amahholo kuhle impela kodwa sizowenzani singakazitholi izidingongqangi ezifana nogesi,” kusho yena.
Amalunga omphakathi akuWadi 7 eMkhakhwini, enyakatho Mpumalanga yeKwaZulu-Natal, abeke izingodo emgaqweni ongenela lapho ebukoyovulwa khona ihholo kabusha kuWadi, iMkhakhwini Community Hall. La malungu omphakathi aveze ukuthukuthela kwawo ngenxa yokuthi athi awanawo ugesi.
Inzima impilo kwizakhamuzi zakule ndawo njengoba ikhansela labo uMthokozisi Mthembu axoshwa ngemuva kokutholakala enecala lokweba imfuyo kanti kulindeleke ukuba agwetshwe ingakapheli le nyanga.
IMeya, uSibonginkosi Biyela, uthe bazizwile izikhalo zezakhamuzi futhi bazozilungisa izinkinga njengoba sebeqalile.
Uthi babhekene nenkulu ingcindezi ngoba kabatholanga mali ngokufakwa kwala mawadi angu-7 ngaphansi kukamasipala wabo kanti basalinde inqwaba yezikweletu zawo okumele zikhokhwe.
Umasipala @mthonjanenimuni uvule ngokusemthethweni izakhiwo zomphakathi @NduNhlapo pic.twitter.com/wtZJFaE8WA
— isiZulu.news24.com (@IzindabaNews24) February 22, 2018
I-NPA ikuqinisekisile ukuthi ithole amadokodo angu-140 ngolwaseSidimeni
INational Prosecuting Authority (NPA) eGauteng isikuqinisekisile ukuthi ithole amadokodo angu-140 emaphoyiseni ngesigameko saseLife Esidimeni.
I-TB 'ayinandaba nokuthi uzalwa ebukhosini noma cha', kusho indodana yeSilo samaBandla
Lowo oyinxusa lesifo sofuba futhi owasinda kuso, uMntwana uNhlanganiso Zulu, usexwayise abantu nobungozi balesi sifo.
Kuxwayiswa izakhamuzi ngokugcina izimpahla eziyigugu ezindaweni okwenza kube lula ukuba amasela afinyelele kuzo.
Weltevreden Park - 04:32:34 AM TRAFFIC LIGHTS not working at Albert Street Ezinye zasemigwaqeni